ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး ၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး ၃
ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး ၃
Posted by etone on May 14, 2011 in Short Story | Comments Off on ကျားကြောက်လို့ ရှင်ကြီးကိုး ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး ၃
“ပိုသေချာအောင် ရန်ကုန်တက်ပြီး စစ်ရမယ်တဲ့ ဟယ် … ”
“ရန်ကုန်ဆိုလျှင် မပူနဲ့ … ကျမ သမီးလေး အဆောင်နေတဲ့ အိမ်မှာ သွားတည်း … ကျမရန်ကုန်တက်တုန်းကတောင် အဲ့ဒီမှာ တည်းတာ … အားနာစရာလည်းမရှိဘူးလေ… သမီးက တယောက်တည်းနေပေမဲ့ အခန်းက ကျယ်ပါတယ်… ။ ကျမလိပ်စာရေး ပေးလိုက်မယ်… ဘယ်တော့လောက်သွားမလဲ … ”
” ဖြစ်နိုင်လျှင် ဒီညနေ ကားလက်မှတ်ဝယ်ပြီး သွားလိုက်ချင်တယ်… ”
” ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆို ကျမညနေစာ ထမင်းဗူးလေးထည့်ပြီး သမီးလိပ်စာလေးပါ ရေးပေးလိုက်ပါ့မယ် … ။ ”
” အေးကွယ် … သာဓု..သာဓု…သာဓု … ”
“ဒီလမ်းက ရွှေဝါလမ်းလား ကလေးရဲ့ … ” “ဟုတ်ပါတယ် … ”
“ဒါဆိုလျှင် ဒီအိမ်နံပါတ်လေးက ဘယ်နားလောက်လဲ ….” “ဟိုးရှေ့က နှစ်ထပ် အိမ်ကြီးက အဲ့ဒီနံပါတ်ပဲ … ။”
” အိမ်ရှင်တို့ … အိမ်ရှင်တို့…. မသင်းသင်းရှိလား ….”
“ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ချင်လို့လဲ ရှင် … ”
” မသင်းသင်းနဲ့ပါ… မြောင်းမြက မသင်းသင်းပါ… ” … ” မသင်းသင်းက အလုပ်သွားပါတယ်ရှင် ပိတ်ရက်ကျမှ ပြန်လာခဲ့ပါလား …သူက အလုပ်က ပြန်တာ နောက်ကျတယ် … ”
” ကျမတို့က သူတို့ရွာက လာတာပါ… မြောင်းမြဝင်ပြီးသူ့အမေ လိပ်စာပေးလို့ လိုက်လာတာပါ… ဒီမှာ ခဏတည်းခိုချင်လို့ပါ… ”
” ကျမက ဒီအဆောင်မှူးပါ …. သင်းသင်းအခန်းမှာ ခဏဝင်နားနေပါနော်… ညကျမှ သူပြန်လာပါလိမ့်မယ်… .ဒါနဲ့ … ဦးလေးတို့ အဒေါ်တို့ စားဖို့ သောက်ဖို့ ဘယ်လိုများ စီစဉ်ထားပါသလဲ …. ”
” ဒီညနေစာတော့ မြောင်းမြကတည်းက ထမင်းဗူး ပါလာပါတယ်… နောက်နေ့ကျမှ ဝယ် စားကြမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်.. ”
” တစ်စုံတစ်ခု အဆင်မပြေတာရှိလျှင် ပြောပါ အားမနာပါနဲ့နော် ” ” အေးအေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ် ”
” ဟာ ကြီးတော်ကြီးတို့ပါလား.. လာလည်တာလား … မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာပြီနော်…. အေးအေးဆေးဆေး နေပြီးမှ ပြန်ပေါ့ .. ပိတ်ရက်ဆို သမီးအားလျှင် လည်စရာနေရာတွေ လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ် .. ”
” သင်းသင်းကတော့ အရင်က အတိုင်းပဲနော်…. ငယ်ရုပ်လေးတောင်မပျောက်သေးဘူ… ။ ကြီးတော်ကြီးတို့က ရန်ကုန်မှာ ဆေးစစ်ဖို့လာတာ … ”
” ဟွန်း… ဆေးစစ်တာများ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်လို့ …. မြောင်းမြတက်လာကတည်းက မစစ်ခဲ့ဖူးလား… သမီးက အလည် လာတာမှတ်လို့… ”
” မြောင်းမြက ဆရာဝန်က ရန်ကုန်မှာ ပိုသေချာအောင် စစ်ပါဆိုလို့… ဘယ်နားက ဆေးခန်းသွားပြရမှန်းလည်း မသိဘူး .. … ”
” ဒါဆိုလျှင် သမီးတို့ စက်ရုံက ဆရာဝန်ဖွင့်ထားတဲ့ ဆေးခန်း သွားမလား … လိုက်ပြပေးမယ်လေ…. သမီးတို့တော့ စက်ရုံထဲမှာရော… အပြင်မှာရော သွားပြဖြစ်တယ်… ဆေးလိုက်တဲ့ အပြင် ၊ ဈေးနှုန်းကလည်း အရမ်းချိုတယ် ကြီးတော်ကြီးရဲ့… ။ ”
“အေးကွယ် … သမီးအားလျှင် လိုက်ပို့ပါဦး ကြီးတော်ကြီးတို့လည်း …ရန်ကုန်နဲ့ သိပ်မရင်းနှီးတော့ ဘယ်နား က စပြီး ပြရမှန်းမသိဘူးကွဲ့ …. ”
” သမီး ဒီနေ့စက်ရုံက ငါးနာရီပြန်လာခဲ့မယ်… ကြီးတော်ကြီးတို့ အဆင်သင့်လုပ်ပြီးစောင့်နေနော်….. ဆရာက ညနေမှ ဆေးခန်းဖွင်တာ ”
” အော်… အေး အေး… ကြီးတော်ကြီးတို့ ပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်…….”
” သမီးပြန်ရောက်ပါပြီ … ကြီးတော်ကြီးတို့ အဆင်သင့်ပဲလား …. ”
” အေးအေး …ပြီးပြီသမီးရေ.. .ဘကြီးတင်သာ ရှိုးထုတ်နေတုန်း ကြာနေတာ….. ။ ”
” မယ်ကျင်ကလည်းကွာ …. ငါတို့မှာ အဝတ်စားကပါတာမဟုတ်ဘူး ရှိတာလေး လျှော်ဖွပ်ပြီး ပြန်ဝတ်ရတော့ နည်းနည်း ရှိုးထုတ်ရတာပေါ့ ကွာ … တော်ကြာတောသား တွေဆိုပြီး ရန်ကုန်ကလူတွေ အထင်သေးနေပါဦးမယ်….။ ”
” ကဲကဲ … ဆင်ခြေတွေ ပေးမနေနဲ့တော့… သွားစို့…။ ”
” ဟာ … ဆေးခန်းလည်း မဖွင့်သေးဘူး.. အရင်က ငါးနာရီခွဲဆိုလျှင် ဆရာရောက်ပါပြီ… ဒီနေ့ နောက်ကျတယ်ထင်တယ်…. ခဏတော့ စောင့်ပါဦးမယ်လေ…… ”
“ခြောက်နာရီတောင် ထိုးတော့မယ်… ဒီနေ့မဖွင့်တော့ဘူးလား မသိဘူး … ဆရာ့ဖုန်းကို ဆက်ကြည့်လျှင် ကောင်းမလား မသိဘူး… ဟာ… နေပါစေတော့ နောက်ရက်မှ ပြန်လာတော့မယ်… အော်ပရေးရှင်းခန်းတွေ ဘာတွေ ဝင်နေလားမသိပဲ … အလိုက်မသိ ဖုန်းဆက်လို့ မကောင်းပါဘူး .. ”
” ကြီးတော်ကြီးရေ…ဆရာဒီနေ့ မဖွင့်တော့ဘူးထင်တယ်… မနက်ဖြန်ကျမှ သမီးဒီနေ့လိုပဲ အိုတီမဆင်းပဲ ပြန်လာခဲ့မယ် … ”
” ဟဲ့ သင်းသင်းရဲ့ …အိုတီက ဘာတုန်း … ” ” အချိန်ပိုကို အတိုကောက်ခေါ်တာပါ ကြီးတော်ကြီးရဲ့… ။ ”
“သိပါဘူးတော် ကျုပ်တို့က ရိုးတာကိုး ဒါနဲ့ သင်းသင်းရေ … ဒီဆေးခန်းမဖွင့်လည်း ဒီနားမှာ ရှိတဲ့ ဆေးခန်းတစ်ခု ပြရအောင် … ကြီးတော်ကြီး ဒီအတိုင်းတော့ မပြန်ချင်သေးဘူး… ။ ”
” ဟုတ်ပြီလေ… ကြီးတော်ကြီးသဘောပါပဲ… တလမ်းကျော်မှာ ဆရာမတစ်ယောက်တော့ရှိတယ်… သွားပြကြည့်တာပေါ့ …..”
“ဆရာမ ကျမအဒေါ် အစာစားရင်း ဗိုက်ပြည့်ပြည့်နေတာကြောင့် ဆေးခန်းလာပြတာပါ….. ။ ”
” ခဏလှဲလိုက်ပါဦး … ” xxxxxxxxxxxxxxxx ” ရပါပြီ ထပါ … ။”
” သမီး အဒေါ်ဗိုက်က လက်နဲ့စမ်းတာတောင် မာတောင်တောင်ချည်းဖြစ်နေတယ် … လိုအပ်တဲ့ ဆေးစစ်တာတွေ လုပ်ရမယ်. .. သောင်းဂဏန်းလောက်ပဲ ကုန်မှာပါ … ”
” ဆရာမ သမီးတို့ မြောင်းမြမှာကတည်းက ရိုက်လာပြီးသား ဒီတပတ်ထဲမှာ ရိုက်တာပါ… အဲ့ဒါလေး ကြည့်လို့ရောရမလား ဟင် …”
“ခက်တာပါပဲ သမီးရယ်…..ဆရာမက သူများ ရိုက်ထားတာ မကြည့်ချင်ဘူး … လိုအပ်လို့ ရိုက်ခိုင်းတာ သမီးတို့ မရိုက်ချင်ဘူးဆိုလည်း သဘောပဲ…..”
” ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး ဆရာမရယ် စိတ်မဆိုးပါနဲ့ … သမီးတို့ ပြန်ရိုက်ဆိုလည်း ရိုက်ပါ့မယ်… ”
” ဆရာမရေးပေးလိုက်တဲ့ နေရာကိုပဲ သွားပြီး ဓါတ်မှန်နဲ့ အပ်ထရာဆောင်းသွားရိုက်နော်… တခြားဆေးခန်းမှာ သွားမရိုက်နဲ့…. ရိုက်ပြီးတဲ့နေ့ အဖြေထွက်လျှင် ဆရာမဆီပြန်လာ ဆရာမအဖြေပြန်ဖတ်ပေးမယ် … နောက်မှ ကုသမှူစကြတာပေါ့ ……”
” ဆရာမ အဖြေရပါပြီ… ”
” အော် … အေး … ပြပါဦး…. ။ ရေးထားတာတော့ ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူး … အစာအိမ်က ယောင်နေလို့ စားလို့မရတာပါ… ယောင်နေတယ်ဆိုတာကလည်း ပိုးဝင်လို့ပါ…. ဒါကြောင့် အစာအိမ်နံရံတွေ ထူနေတယ်.. စိတ်မပူနဲ့ …ဆရာမဆီမှာ ငါးရက်ပဲ ဆေးထိုးဆေးသောက်လုပ် ပျောက်တယ်….. ဒီမှတ်တမ်းတွေကတော့ ဆရာမပဲ သိမ်းထားမယ် …. စိတ်ချလက်ချထားခဲ့နော် …. ”
” ဟုတ်ကဲ့… ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမရယ် … သမီးတို့လာပါမယ်……”
” ဆရာမ သမီးတို့ အဒေါ် ဒီနေ့ ငါးရက်ပြည့်ပြီ … ထူးခြားပြီး သက်သာလာတာမျိုး မရှိဘူး …. ဆေးရုံတက်ဖို့လိုမလို ပြောပေးပါဦး … စိတ်ပူလွန်းလို့ပါ… အဒေါ်က အစားနည်းပြီး တဖြည်းဖြည်း အားယုတ်လာပြီ …… “